Massimiliano Allegri oo fariin gaar ah ku macsalaameeyay Gianluigi Buffon – Gool FM
(Juventus) 20 Maajo 2018. Tababaraha kooxda Juventus Massimiliano Allegri ayaa amaanay halyeeyga Gianluigi Buffon, kaasoo ku dhawaaqay inuu ka baxayo kooxda reer talyaani ka dib kulankii Sabtida ee Hellas Verona, kadib mudo dhan 17 sano uu soo xirnaa maaliyada Bianconeri.
Massimiliano Allegri ayaa kusoo daabacay bartiisa Twitter-ka: “Gianluigi Buffon ayaa shalay soo xiray cutub weyn ee taariikhda Juventus ah, Andrea Pirlo ayaa isna barri dhihi doona macsalaama, sharaf ayay ii tahay inaan lasoo shaqeeyo”.
Andrea Pirlo ayaa ku dhawaaqay in uu ciyaari doono kulankiisa sagootinta, bari oo isniin ah ay taariikhdu tahay 21 Maajo, waxaana kulankan kasoo qeyb gali doona xidigo waaweyn ee caan ka ah kubada cagta.
Laakiin Gianluigi Buffon ayaan ilaa iyo haatan go’aamin sida uu ka yeeli doono mustaqbalkiisa, kadib marka uu ka dhaqaaqo kooxda Juventus. Laakiin waxaa lala xiriirinayaa kooxda reer france ee PSG.